Ny fampiharana 8 tsara indrindra hianarana mandihy hiphop | Androidsis
YouTube dia nanjary iray amin'ireo fomba fanabeazana mahazatra indrindra hianatra hanao zavatra isan-karazany, manomboka amin'ny fanamboarana zavatra madinidinika, amin'ny fananganana trano isan-karazany, amin'ny fahatongavana ho elektrisianina, mpantsaka plastika na asa hafa.
Fa lojika ny trano tsy vita amin'ny tafo ary tsy maintsy jerentsika ny andiana toro-hevitra fototra hanatanterahana ny tanjontsika. Raha te hianatra mandihy hiphop isika, ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mijery ny Play Store.
Ao amin'ny Play Store isika dia afaka mahita rindranasa samihafa mamela antsika mianatra ireo dingana sy teknika fototra mba hanomezana ny kesika voalohany amin'ity dihy ity izay nanjary lamaody tato anatin'ny taona vitsivitsy, 40 taona taorian'ny nahombiazany.
1 Fampiofanana Hip hop
2 Torolàlana momba ny dihy Hip Hop
3 Dihy Hip Hop Dihy Videos
4 Ahoana ny fomba fialan-tsasatra
5 STEEZY - Mianara mandihy
7 Lalao 2 hianarana Hip Hop
Fampiofanana Hip hop
Raha te hanomboka ny dingana voalohany eto amin'ny tontolon'ny Hip Hop isika dia mila mijery ny fampiharana fiofanana Hip Hop, fampiharana iray azo maimaim-poana ao amin'ny Play Store izay misy doka sy fividianana fampiharana.
Ny fampiofanana Hip Hop dia manome antsika hetsika maro be ary maherin'ny 60 ny fomba isan-karazany, manomboka amin'ny fototra indrindra ka hatramin'ny fandrosoana. Ny fanazaran-tena rehetra hampihetsi-po dia misy amin'ny sokajy 3: Locking, Popping and Breaking.
Manolotra antsika ny fampiharana a drafitra fanofanana hianaranao Hip Hop afaka 8 herinandro, fandraketana ireo fiofanana rehetra ataontsika isan'andro. Mba tsy hitovizantsika dia manasa antsika ny fampiharana hampandeha fampandrenesana mba hampahatsiahivana antsika isan'andro fa miandry ny asantsika hianatra ity dihy ity isika.
Fampiofanana hip hop - mandihy handoro tavy
Developer: Zavaboary Studio
Torolàlana momba ny dihy Hip Hop
Araka ny tondroin'ny anarany, Hip Hop Dance Guide dia torolàlana ahafahantsika manomboka manome ny antsika dingana voalohany eo amin'ny tontolon'ny Hip Hop. Ny iray amin'ireo teboka matanjaka indrindra amin'ny fampiharana dia ny famelany ny fanazavana sy ny fampisehoana amintsika horonan-tsary momba ny fihetsiketsehana samihafa izay ampiasaina amin'ity dihy ity.
Ireo horonan-tsary, tsy misy ao anatin'ny fampiharana izy ireo, noho izany mila fifandraisana Internet isika. Hita amin'ny YouTube ireo horonan-tsary ireo, koa raha tokony hampiasa ilay rindrambaiko isika dia afaka mahita ilay fantsona nampiantranoana azy ireo ary mankafy azy ireo amin'ny solosaina na ny fahitalavitra.
Ny iray amin'ireo tanjaky ny fampiharana ity dia tsy misy karazana doka. Ary tsy mampifangaro karazana fividianana rindrambaiko amin'ny fampiharana, maimaim-poana tanteraka ny fisintomana.
Dihy Hip Hop Dihy Videos
Fampiharana mahaliana iray hafa hodinihina raha te hianatra Hip Hop isika ao amin'ny Hip Hop Dance Steps Videos, fampiharana izay misy a horonan-tsary YouTube marobe, noho izany, toy ny fampiharana teo aloha, ny fifandraisana Internet dia ilaina eny na eny.
Ny atiny rehetra misy dia sokajina amin'ny sokajy samihafa, noho izany dia tena mora ny mahita ny dingana na ambaratonga tadiavintsika. Hip Hop Dance Steps Video dia azo alaina maimaimpoana maimaim-poana tanteraka, ao anatin'izany ny doka fa tsy misy fividianana fampiharana.
Ahoana ny fomba fialan-tsasatra
Ny fomba fandihizana dia mamela antsika hiala Choreographies feno lesona breakdance mba hahafahanao manomboka mandray ny dingana voalohany amin'ny fomba ary afaka mandroso tsikelikely ary amin'ny faharetana sy faharetana be.
Natao ny fampiharana ampianaro ny teknika fototra rehetra amin'ity dihy ity amin'ny alàlan'ny lesona tsotra. Fa ankoatr'izay dia hamaly ireo fanontaniana maro apetraky ny olona te hianatra an'ity karazana dihy ity koa ny tenany, toy ny hoe azo ianarana avy any an-trano izany, raha sarotra ny mianatra breakdance, ny fomba hanaovana ny fihodina, inona dia backspin na E zazavavy ...
Raha miditra amin'ny ekipa misintaka isika, dia afaka mahazo namana vaovao izay afaka miara-manao fanazaran-tena, izay tsy isalasalana fa mahatonga ny fianarana ho zaka kokoa. Ny fomba fandefasana dihy dia misy ho anao misintona maimaim-poana, misy doka fa tsy misy fividianana fampiharana.
STEEZY - Mianara mandihy
STEEZY no studio fandihizana feno ho an'ny fitaovanao Android na Smart TV ary hanampy anay hianatra mandihy tsikelikely izany, amin'ny gadona mety indrindra aminay. Miaraka amin'ny kilasy 800 mahery ary ampiana bebe kokoa isan-kerinandro, dia misy hatrany ny fomba sy fanao mahazatra mahafinaritra azo zahana.
Ny kilasy dia manomboka amin'ny vao manomboka ka hatrany amin'ny manam-pahaizana, noho izany dia tsy hoe tsara ho an'ny fianarana Hip Hop fotsiny, fa azontsika ampiasaina koa io mianatra dingana vaovao, manatsara ny teknikanay… Ny sasany amin'ireo fomba fandihizana mety ho hitantsika amin'ny alàlan'ity fampiharana ity dia Hip-hop, Open Style, K-pop, House, Breaking, Popping, Whacking, Krump, Heels, Jazz Funk ankoatry ny hafa.
Mpampianatra STEEZY matihanina amin'ny dihy izy ireo izay mandray anjara isan-taona amin'ny fifaninanana marobe manerana an'izao tontolo izao, fitsangantsanganana, fandraketana horonantsary mozika ... Raha raisinay izay rehetra hitantsika ao ambadik'ity fampiharana ity dia tsy mahagaga raha mila famandrihana isam-bolana ilay fampiharana.
Ny vidin'ny famandrihana isam-bolana dia $ 20, fa raha misafidy ny famandrihana isan-taona isika (vantany vao voamarinay ny fomba fiasan'ny fampiharana) dia hitahiry vola 40 dolara isika. Azo alaina maimaim-poana ny fangatahana.
Raha vantany vao manana fotony isika dia fotoana tokony hijerena ireo horonantsary samihafa azontsika amin'ny sehatra YouTube. Ao amin'ny YouTube, afaka mahita horonantsary marobe isika izay hanampy antsika hahatanteraka ny teknika sy / na ireo dingana izay efa nianatra izahay fampiasana ireo rindranasa samihafa misy ao amin'ny Play Store.
Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny mitady horonantsary izay ampianarin'izy ireo antsika ny dingana fototra sy Alefaso mihetsika miadana ilay horonan-tsary. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy tsindrio ny kodiarana eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny horonan-tsary, tsindrio ny hafainganam-pandeha ary fidio ny sanda ratsy.
Miaraka amin'ny filalaovana mihetsika miadana, ny saintsika afaka mamerina mandinika sy mitadidy ireo dingana amin'ny, miaraka amin'ny fampiharana, ataovy haingana kokoa izy ireo. Toy ny dihy na asa hafa, raha tsy manao fanazaran-tena isan'andro ianao dia tsy afaka miasa fahagagana ireo fampiharana (tsy ao amin'ny Matrix isika amin'izao fotoana izao).
Lalao 2 hianarana Hip Hop
Na dia tsy fampiharana tsara hianarana dihy hip hop aza izy ireo dia azonao atao ny mijery ny lalao Hip Hop School sy Hip Hop Battle, samy avy amin'ny mpamorona iray ihany. Afaka manao izany izahay ao amin'ny Hop Hop School Mianara amin'ny hafaingantsika mamerina ny tarehin-tsoratra miverimberina hatrany, ireo hetsika tadiavintsika tsianjery.
Ao amin'ny Battle of Hip Hop, isika dia hahita interface tena mitovy izay azontsika atao koa ianaro ny fihetsehana amin'ny alàlan'ny tarehin-tsoratra. Ireo lalao roa ireo dia azo alaina maimaimpoana maimaim-poana tanteraka, ao anatin'izany ny doka sy ny fividianana lalao.
Ady Hip-hop: Izy ireo / Izy ireo
Developer: Coco Play avy amin'ny TabTale
Hip Hop School - Ny lalao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana 8 tsara indrindra hianarana dihy hiphop
Fampiharana jiro 5 ambony ho an'ny Android